Abavelisi beGcina ugcino oluzenzekelayo-abaThengi beCandelo loGcino abaQalayo kunye neFektri
Raking Uhlobo oluzenzekelayo Ice Storage
Uhlobo lweqhwa lokuloba uhlobo oluzenzekelayo lokugcina umkhenkce luwela kwiindidi ezimbini: uhlobo lwekhonteyina noludibeneyo. Ukushukunyiswa kwaye kulula ukuyifaka, ziyilelwe ngomthamo wokugcina ukusuka kwiitoni ezili-18 ukuya kwiitoni ezingama-200.
Uhlobo lweScrew UkuGcina uMkhenkce ngokuzenzekelayo
Ukugcinwa okuthembekileyo komkhenkce, kuyilelwe ubungakanani obuncinci bokugcina umkhenkce.
Uhlobo olujijayo lwesakhiwo sokuqhekeza umkhenkce siya kuzisa umkhenkce ngokuqhubekayo, akukho xanduva lokujamelana nomkhenkce.
UkuGcinwa kweQhwa eliQhelekileyo
Iipaneli zokugcina ezibandayo zokwakhiwa kwegumbi lokubanda ziyafumaneka ngobude obenziwe ngokwesiko, ububanzi, ukuphakama, kunye nezinto zomaleko womphezulu, ukuze uhlangane nabasebenzisi 'iimfuno ezahlukeneyo zesicelo. Siyathembisa igumbi lokugqibela elibandayo linomgangatho ophezulu kunye nokuthembeka okuphezulu.
V Uhlobo lokuGcina uMkhenkce
Umgqomo wokugcina umkhenkce uyilwe ngokukodwa ngogaleko olufakwe igqabi kabini. Kukho umaleko womoya ojikeleze umkhenkce. Nokuba umgqomo wokugcina umkhenkce uzele ngumkhenkce kukho isixhobo sokupholisa esinezixhobo zokugcina ubushushu bokugcina umkhenkce ku-5℃- - 8℃, ukugcina umkhenkce womile kwaye upholile.
Ubungakanani obuncinci bokuGcina uMkhenkce
Ukugcinwa komkhenkce kwenziwa ngeplate yangaphakathi kunye nepleyiti yokutywina yangaphandle, intsimbi engenasici, imfuneko yezempilo yokuhlangana.